Ihe ngosi na Ede alaghachila! - Thrilltalk.com
Home/Kpamkpam/Fairlọ ikpe mara na Ede alala azụ!
0 22 Nkeji 1
N'ime afọ 8 gara aga, ọ nweghị ahaziri ihe ndozi na Gelderland Ede. Ikpeazụ ngosi ikpeazụ dịpụrụ adịpụ nke dịpụrụ adịpụ na mpụga obodo, ndị bi na ya ahụghị ya. Enwekwara mkpesa site na ndị ọrụ na ndị ọchịchị jụrụ ọtụtụ ego maka ebe. Nke a pụtara na ọ nweghị ihe omume ahaziri ahazi na Ede kemgbe 2012.
N'afọ a, ngosi ahụ laghachiri! Anyị gwara ụfọdụ ndị bi na Ede nwere obi ụtọ na nhọrọ nke onyeisi obodo Verhulst iji weta mma na Ede. “Ede kwesịrị inwe nnukwu ngosi kwa afọ ngosi kwa afọ, na nke a agaghị ekwe omume ugbu a n’ihi corona bụ ihe kwere nghọta. Nke a onyeisi obodo na-egosi na ọ ghọtara ihe ndị mmadụ chọrọ. ” ka onye ọbịa bịara ebe ngosi ahụ.
Ezinaụlọ dị mma
A kwaliteburu ngosi ahụ dị ka ngosipụta nke ezinụlọ, yabụ ọtụtụ ndị bi na-eche na ọ gaghị enwe ihe ọzọ karịa egwuregwu na-atọ ụmụaka ụtọ. N'oge a na-ewulite ya, ndị nlekọta nke Kermis Ede Facebook peeji nke na Project1 si Sipkema batara na saịtị ahụ. Ọzọkwa guzoro Ghost Villa wuru ngwa ngwa.
The ngosi na omume ọma iche iche, nke mere na e nwere n'ezie ihe maka onye ọ bụla. Ihe e mesiri ike bụ ka ezinụlọ, mana nke ahụ bụ isi na-akpata corona nha. N'ezie, a ga-agbasa ụlọ ngosi ahụ n'elu ebe atọ dị ka ụdị obere Tilburg.
A na-emeghe ihe ngosi ahụ ruo Satọdee site na 13: 00 ruo mgbede 21: 00 na Sọnde, a na-emeghe ngosi ahụ site na 12: 00 pm ruo 18: 00 pm. Biri ma obu ino nso? Mgbe ahụ, lee anya na support de ngosi ndị ọrụ ndị na-enwe afọ siri ike.
Nke a bụ obere foto echiche nke ngosi na Ede:
Foto & ozi si: Ezigbo Ede.
Onyeisi obodo ndị ọrụ facebook Ulo olu Ghost obodo Ezigbo Ede Project1 Ogige Halllọ Nzukọ Obodo Sipkema Okechukwu